58 ruux oo lagu dilay Syria, kadib hub Kiimiko oo lagu weeraray Idlib | Baydhabo Online
58 ruux oo lagu dilay Syria, kadib hub Kiimiko oo lagu weeraray Idlib
Ugu yaraan waxaa ku dhimatay 58 qof halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale weerar la aaminsan yahay in loo adeegsaday hubka Chemicalka ah kaasi oo lagu weeraray magaalada Idlib ee waqooyi galbeed ee waddanka Syria.
Diyaaradaha dowladda Ruushka iyo kuwa Syria ayaa duqeyntaan si wada jira u fuliyay, waxaana halkaasi ku dhintay dad badan oo shacab ah.
Dowladda France ayaa baaq deg deg ah u dirtay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si looga hadlo weerarkii ugu dambeeyay ee diyaaradaha Ruushka ay ku qaadeen waddanka Syria,iyagoo adeegsaday hubka Chemicalka ah.
Dhinaca kale Wasaaradda Gaashaadhigga dowladda Ruushka war ay soo saartay waxay ku beenisay in waddanka Syria gaar ahaan xaafadaha u dhaw magaalada Idlib aysan weerar ka geysan diyaaradaha dagaalka Ruushka oo istcimaalayo hubka gaaska ah.
Dowladda Syria ayaa horay iskaga fogaysay inay isticamaasho hubka Chemicalka ah, iyadoo kaashanayso Dowladda Ruushka balse baaritaan ay sameysay ururka la dagaalanka hubka Chemicalka ah ee raacsan Qaramada Midoobay ayaa horay waxay Syria ugu eedeysay inay saddex weerar ay u adeegsatay hubka Chemicalka ah.